Xaaladda amni ee Galkacyo oo ka soo raynaysa iyo diiwaan-galintii hubka yaryar oo wali socota. – Radio Daljir
Galkacyo, May 14 – Toddobaaddadii ugu danbeeyey magaalada Galkacyo waxaa ka socday hawl-gallo is daba-joog ah oo ay wadeen ciidamada nabad-galyada, hawl-galladaasi oo looga gol-lahaa adkaynta amniga magaalada.
Taliyaha ciidamada hawl-gallada amni ee magaalada Galkacyo Col. Muuse Axmed Cabdiraxmaan, oo maanta waraysi gaar ah siiyey idaacadda Daljir ayaa sheegay in ay qaadeen ciidamadu tallaabooyin amni oo wax ku ool ah, wax badanna laga baddalay xaaladda nabad-galyo ee Galkacyo.
Ciidamada amnigu intii ay hawl-galladaan wadeen waxaa ay qab-qabteen dad badan gaadiid badan oo loo taxaabay saldhigyada magaalada kuwaasi oo saraakiisha bilaysku ay tilmaameen in ay faraha kula-jireen waxyaabo loo arkay in ay meel ka dhac ku yihiin amniga iyo nabadda magaalada.
Dhinaca kale sida uu tilmaamay Col. Muuse Xasaasi, waxaa meel wanaagsan maraya wax badanna ay ka hirgaleen go’aamadii guddiga nabad-galyada gobolka ee tilmaamayey mamnuucidda hubka sharci-darrada, sidoo kalena dadweynaha farayey in ay diiwaan-gashadaan hubkooda yaryar ee ay naftooda iyo maalkooda ku dhawrtaan.
Toddobaadkii ugu danbeeyey magaalada Galkacyo waxaa laga dareemayey degganaan xagga amniga iyo nabad-galyada ah, waxayna u muuqataa mid ka soo kabanaysa dhibaatadii amni-xumo ee in dhaawaale daashatay.
Muddo-dheer Galkacyo waxay saaxiib dhaw la ahayd falal nabad-galyo xumo oo u badnaa dilal qorshaysan iyo qaraxyo miino kuwaasi oo lala bar-tilmaameedsnayey wax ku oolka bulshada reer Galkacyo waxaana intii falalkaasi ay socdeen la khaarajiyey oo laga takhalusay waxgarad badan oo iskugu jiray saraakiil dawladeed, nabaddoonno, culimo-awdiin, ganacsato iyo khaqsiyaad kale oo ka mid ah bulshada caadiga ah.